Usayizi 21.5 MB
Play 8 594
Umbhali: Pierino Primavesi
I Junkers Ju-52 kwaba esiphathiswa edume kunazo German phakathi nempi. Walahla phansi paratroopers e Holland, eKrethe futhi kamuva Ardennes.
Yona futhi le ndiza yayincane futhi isibhamu esincane kakhulu. Ngenxa yalokho, yena balahlekelwa abaningi cishe kuzo zonke izabelo, ikakhulukazi e eKrethe, wafike kwaseStalingrad. Wathwala amabutho supply eNyakatho Afrika, kwaseStalingrad futhi aseBaltic. Wake wasebenza njengoMbhishobhi ezokuthutha mail eChina iye ifakwe yamabhola antantayo ukuthutha ugodo endle of Canada.
I Ju-52 babekwazi fly kusukela Berlin eRoma amahora ayisishiyagalombili phezu Alps, i feat ezihlaba umxhwele ngesikhathi. The last Ju-52 yakhululwa ne Swiss Air Force in 80s sekwephuzile. Eminyakeni engaphezu kwengu-50 emva ...! Umlando waleli indiza is awesome. Thina Ngeke ngikukhohlwe lokhu aircraft yisakhiwo sodumo!
Kuyinto add-on asezingeni elifanele kakhulu, nge 3 tinkhulumo kanye inqwaba ukwakheka okufaka eyabangani Air France kanye of the Luftwaffe.
Amajaji ukusebenza ngokugcwele ngo 2D futhi 3D (VC abanikeze asebenza nabo virtual).
Ngaphezu kwalokho, ungavakashela ngisho ngaphakathi indiza futhi ngo 3D.
A indiza enhle kubalandeli imifanekiso elidala.
I-Vultee XP-54 FS2004 1.1
Waco NWA yemikhumbi FS2004